Ahoana ny fomba hanampiana ny kalandrie Eurocopa 2020 amin'ny iPhone na Mac | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hanampiana ny kalandrie Eurocopa 2020 amin'ny iPhone na Mac
Noho ny areti-mandringana dia tara ny Euro 2020 tamin'ny taona 2021, mbola mitazona ny isa mitovy ihany. Eny, rehefa tapitra ny La Liga, miandry ny hanombohan'ny Eurocup ianao ary tsy te halahelo lalao, na Espana na ekipa eropeana hafa, ny tsara indrindra dia ny fampiasana ny kalandrie.
Fa mazava ho azy, izahay dia tsy hanondro ny kalandrie, tsirairay, ny lalao rehetra amin'ny Euro 2020. Ny fomba tsara indrindra anaovana azy dia amin'ny alàlan'ny rohy avelako etsy ambany. Ity rohy ity dia milaza amintsika ny andro sy ny ora amin'ny lalao rehetra hatao eo anelanelan'ny 11 Jona sy 11 Jolay eo anelanelan'ny ekipa 24 eropeana hifaninana amin'ny toerana 11.
Havaozina ho azy ny tetiandro miaraka amin'ireo ekipa voasokajy, noho izany tsy mila manao na inona na inona avy amintsika isika, miandry fotsiny ny fampandrenesana mifandraika ary alao ny fantsona izay handefasana azy ireo.
Mba hanampiana ny kalandrie Eurocopa 2020 amin'ny iPhone, iPad na iMac dia tsy maintsy ataontsika ireo dingana voalaza etsy ambany.
Voalohany indrindra, tsy maintsy mitsidika an'io isika rohy.
Manaraka izany, amin'ireo safidy rehetra aseho dia tsy maintsy misafidy Apple iCal isika. Raha tokony hanokatra ny rindranasa Kalandrie dia hiseho ny fampandrenesana amin'ny Internet manasa antsika hanisy famandrihana amin'ny kalandrie, fampandrenesana izay tokony hanindriana ny OK.
Raha manao io dingana io amin'ny Mac isikaRehefa manindry ny rohy ianao dia hiseho hafatra iray manasa antsika hanokatra ny rindranasa kalandrie. Rehefa manamafy izany fangatahana izany dia hisokatra amin'ny alàlan'ny fikandrana fanamafisana miaraka amin'ny URL amin'ny kalandrie ny rindranasa Kalandrie ary toerana tokony hanaovan-tsika hisoratra anarana.
Manaraka, tsy maintsy ampidiro ny anaran'ny kalandrie, safidio ny toerana iCloud (mba hampifanarahana azy amin'ny fitaovana rehetra) ary zahao raha ampiasaina ny hafanan'ny fanavaozana.
Aiza no hijerena Euro 2020
Ny vondrona Mediaset (Telecinco sy Cuatro) dia hamela antsika hahita ny lalao rehetra ataon'ny Eurocup izay hatao manomboka ny 11 Jona ka hatramin'ny 11 Jolay ho misokatra sy velona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ahoana ny fomba hanampiana ny kalandrie Eurocopa 2020 amin'ny iPhone na Mac
Ho hitantsika ve ny fitaovana ao amin'ny keynote WWDC 2021?
iFixit dia mampiseho amintsika ny efijery Mini LED an'ny iPad Pro vaovao
Jereo ny safidintsika miaraka amin'ny fihenam-bidy tsara indrindra amin'ny teknolojia sy Apple